पूर्व एसएसपीको आक्रोस: कुलमानको ठाउँमा अर्को व्यक्ति आएर फेरि लोडसेडिङ भयो भने रत्नपार्कमा झुण्ड्याएर ढुङ्गाले हानेर मार्दा हुन्छ (भिडियो):: Naya Nepal
पूर्व एसएसपीको आक्रोस: कुलमानको ठाउँमा अर्को व्यक्ति आएर फेरि लोडसेडिङ भयो भने रत्नपार्कमा झुण्ड्याएर ढुङ्गाले हानेर मार्दा हुन्छ (भिडियो)
काठमाण्डौ: एक जना पूर्व प्रहरी एसएसपीले प्रहरी संगठनको चेन अफ कमाण्डको विषयमा गंभिर प्रश्न उठाएका छन् । पछिलो समय कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको माग राख्दै सडक प्रदर्शन चर्किएपछि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै पूर्व प्रहरी एसएसपी किवाहाङ राईले प्रहरीको कार्यशैली प्रति प्रश्न उठाएका हुन् । १८ घण्टा लोडसेडिड. खेपेर जनता आक्रान्त भएको समयमा कालरात्री देखि उज्यालो रात्रीमा आउने एउटै व्यक्ति कुलमान भएको भन्दै प्रहरीले प्रदर्शनकारी माथि दमन गरेको भन्दै उनले विरोध जनाएका हुन् ।
राईले नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक सबेन्द्र खनाल माथि गंम्भिर आरोप पनि लगाएका छन् । कंचनपुरकी निर्मला पन्तको ब,ला,त्कार पछिको ह,त्याको घट्नामा संलग्न व्यक्तिलाई जोगाउने काम सवेन्द्र खनाल बाट भएको उनको आरोप छ । पूर्व एसएसपी राईले सो घट्नाको अभियुक्त पत्ता नलागाउनु सुनियोजित भएको भन्दै उनले प्रहरीले जानिजानी अप,राधी लुकाएको दाबी गरे ।
राइले भने त्यसैको बदौलत अप,राधी लुकाएको कारण प्रधानमन्त्री ओलीले सवेन्द्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगको आयुक्त बनाउन योग्य ठानेका छन् । तर यस्ता अपराधिक क्रियाकलासँग टाइअफ भएका कसैले राजनिति नियुक्ति पाए आगो बाल्ने चेतावनी दिए । एक अनलाईसँगको अन्तबार्तामा उनले भनेका छन् यस्ता व्यक्तिले नियुक्ति पाए भने आगो बाल्नुपर्छ नियुक्ति हुन दिनु हुदैन ।
उनले कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति नगरेर उनको ठाउँमा दोस्रो व्यक्ति आएर मुलुकमा पुन लोडसेडिड.सुरु भयो भने अब नियुक्ति हुने कार्यकारी निर्देशकलाई रत्नपार्कको रेलिड.म झु,ण्डाएर ढुङ्गाले हान्दा फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाली जनताले अब कुनै अर्थमा कुनै मुल्यमा अब लोडसेडिड.खेप्नेबाला छैनन् । उनको भनाई छ । उनले आफु वकिल तथा पूर्व सुरक्षाकर्मी भएको भन्दै नेपाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहान्छु अब फेरि लोडसेडिड. भयो भने छोडिदैन ।
भिडियो हेर्न तलको लिड.मा क्लिक गर्नुहोस ।